कस्तो ओठ भएकाको भाग्य कस्तो हुन्छ ? जानी राखौँ – Etajakhabar
कस्तो ओठ भएकाको भाग्य कस्तो हुन्छ ? जानी राखौँ
ताजा खबर :- दुबै ओठ समान र सुन्दर हुने व्यक्ति सत्यप्रिय, सुशील तथा सज्जन वृत्तिको हुने गर्दछ । उसले कोमल शब्दले भरिएको मिठो वाणीको प्रयोग गर्दछ । यस्तो व्यक्ति परहितकारी तथा भाग्यशाली जीवन व्यतीत गर्ने हुन्छ । यहाँ ओठको बनावट र त्यसले मानिसमा पार्ने प्रभावका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
दुबै ओठ मोटो – यस्तो व्यक्ति बढि बोल्ने हुन्छ । उसले अन्तरमनमा कुनैपनि रहस्य लुकाएर राख्न सक्दैन । खानपानमा विशेष रुचि राख्ने हुन्छ । साथै धेरै खाना खाने स्वभावको हुन्छ । दुबै ओठ पातलो – यस्तो व्यक्ति सरल चित्तको हुने गर्दछ । संघर्षबाट उन्नति गर्ने खालको हुन्छ । बढ्दो उमेरमा हरेक प्रकारको सुख भोग गर्ने हुन्छ । माथीको ओठ ठुलो – यस्तो व्यक्ति प्रभावशाली हुन्छ, स्वादिष्ट भोजनको लालसा राख्दछ र यस्ता व्यक्तिहरू गम्भीर प्रवृत्तिका हुन्छन ।
तल्लो ओठ ठुलो – यस्ता व्यक्तिहरू अहंकारी वृत्तिका हुन्छन । यस्ता व्यक्ति आफ्नो कुरा मनाउनका लागी जे पनि गर्न सक्दछन । अरू मानिसहरूको दुःख सुनेर वा हेरेर आन्तरिक प्रसन्नताको अनुभव गर्दछन । यिनीहरू सहनशील हुँदैनन ।
रक्तिम ओठ– शौर्य, वीर्य र उत्साहको द्योतक हो यस्तो खालको ओठ । यस्ता स्त्री पुरूषमा काम लालसाको निकै फाइदा उठाउने गर्दछन । उनीहरू ऐश्वर्यशाली तथा धनवान पनि हुन्छन ।
कालो ओठ – यस्तो प्रकारको ओठ कपट तथा संघर्ष को प्रतीक मानिन्छ । यस्ता व्यक्ति मिथ्यावादी हुन्छन साथै सधै दुख भोगिरहन्छन ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, भाद्र २६, २०७३ समय: १५:१७:१६
इज्जत जोगाउन आफ्नै बुवाले छोरीलाई जिउँदै जलाए. १९ बर्षिय लक्ष्मी यसरि एकछिनमै खारानी बनिन् (तस्बिर सहित)
दक्षिण कोरियाले ११३ वर्ष अघि २०० टन सुन सहित समुद्रमा डुबेको रूसी सैनिकको पानी जहाज भेटायो (फोटो सहित)
डा.केसीको समर्थनमा आन्दोलन चर्किदै गएपछि बोले सत्तारुढ दलका युवा संगठन,मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरण गर्न माग
वीपीले उहिल्यै चिनेका कम्युनिस्टलाई हामी बल्ल चिन्दैछौँ : बीपीले कम्युनिस्टसँग मिल्नु हुँदैन भनेको अहिले बुझ्दैछुः देउवा
टिका बुढाथोकी र दिपक न्यौपानेबीच भएको टेलीफाेन बार्तालाव बारे दिपक न्यौपानेले,खुलाए यस्तो रहस्य ( भिडियो सहित)
यी युवक रातभरी ३२ किमि हिँडेर पहिलो दिन अफिस पुगेः मालिकले भावुक हुँदै उपहारमा दिए नयाँ कार (भिडियोसहित)